Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » IATA: Ọ dị oke mgbagwoju anya n'ụzọ ala ga-emepe » Page 2
Njikwa Ewu dị mfe
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke ahịa njem iri ise kacha elu, nke ruru 50% nke okporo ụzọ zuru ụwa ọnụ, na-ekpughe mkpa ngwa ngwa maka ịdị mfe nke usoro dị iche iche gọọmentị na-eji iji jikwaa ihe egwu dị na COVID-92.
“Enwere oke mgbagwoju anya n'ụzọ ala si emepe. Enwere ike weghara ohere maka ijikọ ụwa ọnụ site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akwado ihe ngwọta "emere n'ụlọ" naanị maka ụzọ na-arụ ọrụ n'ofe ala, " Walsh.
Ihe nchoputa nchoputa gunyere ihe ndia:
Ọnọdụ ole na ole na -emeghe n'ezie:
N'ime steeti iri ise nyochara, 50 nwere ụdị mmachi COVID-38 na onye ga-abanye. Naanị mmadụ asaa enweghị mgbochi mgbochi ma ọ bụ ihe mgbochi iche mgbe ha rutere. Ndị ọzọ ise enweghị ihe mgbochi ọzọ na onye ga -abanye mana debe usoro iche iche maka ụfọdụ mgbe ha bịarutere.
Enweghi agbanwe agbanwe n'etiti steeti 38 nke na -ejigide mmachi mbata:
Steeti iri abụọ gụpụrụ ma ọ bụ buru amụma maka mmachibido n'ụdị dị iche iche maka ndị njem ọgwụ mgbochi, mana
Naanị isii ka enwetara na ụmụaka dị obere (ndị enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi n'ọtụtụ ahịa) mgbe ha na ndị okenye nwere ọgwụ mgbochi na -eme njem. Enweghịkwa agbanwe agbanwe na nkọwa afọ ụmụaka.
Steeti itoolu amataghị ndepụta ọgwụ mgbochi zuru oke nke WHO.
Enwere opekata mpe nkọwa ise dị iche iche maka isi mgbe agbatịchara ọgwụ mgbochi ọrịa weere na ọ dị irè.
Enweghi nkwekọrịta na oge nke nkwado maka onye njem ka a ga -ewere dị ka ọgwụ mgbochi.
Naanị steeti anọ (Germany, France, Switzerland, na Austria) na-amata mgbochi sitere na ọrịa COVID-19 gara aga dị ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Enweghi agbanwe agbanwe na ihe achọrọ iji gosipụta ọrịa tupu.